musha 9 Products 9 MotioPI
DZIVA DZIMWE DASASHEET
Cognos inogona kuve inoda nguva uye simba kune zvimwe zvakajairika zvemukati mabasa. Isu tinopa maCognos nyanzvi senge iwe uye zvikwata zvako kuoneka mune zvemukati mechirongwa kuitira kuti vagone kupindura zviri nyore mibvunzo nezve mushandisi kuwana, kuchengetedza, mashedhi, uye zvimwe zvemahara!
Kana yakwana nguva yekugadzira kuwanda uye shanduko kune zvemukati, isu tinobatsira vatungamiriri veCognos pamwe ne MotioPI Pro.
“Chishandiso chine simba rinoshamisa; inofanirwa-kuva nechero akakomba Cognos Administrator. "
Mukuru Cognos Analytics Administrator/Developer
MotioPI Freeware ndeye Cognos Administrator Shamwari Yakanakisisa
Motio yakavambwa pakuda kuita kuti Cognos ive nyore kushandisa uye iwedzere simba. Nekudaro, isu tagara tine yakakosha dhiraivha yekuita kuti hupenyu huve nyore kune avo vakapomerwa kuchengetedza zvinhu kumusoro uye nekumhanya zvine mutsindo- maCognos Administrators.
Heano ingori sampling yekuti sei MotioPI inokubatsira kuti ushande zvakaringana, kusanganisira kuita otomatiki mabasa angave anonetesa nguva kunyura.
Tora zvakare yakarasika, yakakuvadzwa, kana kudzimwa Sisitimu Yemhando
Tora zvakare zvemukati kubva zvakabviswa maCognos vashandisi
Query uye tsvaga ese eCognos zvemukati zvinoenderana chaiwo maitiro (senge ese marepoti akavakirwa pane imwe package)
Tarisa uye nyora zvese zvekuchengetedzwa kwevashandisi vako
Gwaro zvivakwa zvevatengesi, dhata masosi, mushumo masevhisi, uye zvigadzirwa zvakaiswa
Simbisa mishumo mushure mekushandurwa kwakaitwa kune modhi
Gwaro purogiramu vanogamuchira
Svinura bhokisi rakakwana rematurusi ne MotioPI Pro.
MotioPI Pro inopa Cognos Administrators maturusi uye otomatiki kuunza zvakatowanda kugona kune rako basa neCognos. Tonga kukosha kwako iwe pachako. Semuyenzaniso:
Kana zvichikutorera maminetsi maviri kuti uchinje mushumo mumwe chete, zvingatora nguva yakareba sei kugadzirisa mishumo zana? With MotioPI Pro, mhinduro inenge maminetsi maviri-pamwe zvishoma.
Kana mushandi akasiya kambani, uye mafaera avo akapukutwa akachena, zvingatora nguva yakareba sei kugadzirisa mashedhiyo kana mishumo inoenderana nemafaira akarasika? With MotioPI Pro, mhinduro maminetsi.
Kana zvinhu zveCognos zvikaendeswa kunzvimbo nyowani, zvingatora nguva yakareba sei kugadzirisa zvakaputsika nzira pfupi? MotioPI Pro inokutendera kuti uwedzere kugadzirisa mapfupi pese paunotamisa zvinhu zveCognos.
MotioPI Pro inokusevha nguva, kushanda nesimba, uye kushungurudzika pasirese yeCognos manejimendi mabasa.
Shandura Zvinonetesa Cognos Analytics Kwidziridza Mabasa
MotioPI Pro inobatsira kutora marwadzo kunze kwekusimudzira. Deredza nguva uye nesimba pane yako Cognos Analytics kusimudzira nekumisikidza kudzokorora asi kwakakosha mabasa, akadai se:
Mhanya cheki yekumisikidza kuti uone nekukurumidza ese ako maCognos mishumo ayo anotadza kugonesesa uye uazvitsaure kubva pachiyero chekusimudzira kwako.
Gadziridza zvivakwa pamapakeji ako muhuwandu kuti uchengetedze maawa ebasa achishandura mishumo kubva kuCQM kuenda kuDQM.
Gonesa Rako Rwebasa Kufamba muCognos
Kune akawanda maCognos ekufambisa zviitiko zvinoda zvisina basa, mamwe matanho ekupedzisa basa. Heino sampuli yeCognos mabasa ayo anoitwa mune akati wandei emaficha mapaneru e MotioPI Pro:
Paunenge uchifambisa kana kudzima Cognos Zvemukati, otomatiki kugadzirisa kudhiraini kuburikidza nepfupi, mapfupi, kurondedzera maonero, uye zvimwe zvinongedzera zvinhu zvingazoputsika.
Kana huwandu hwekugadzirisa FM Model mitauro yakawanda, tsananguro, uye maturu ekushandisa, MotioPI Pro inogona kushambadza iyo shanduko otomatiki.
Nguva Dzinochengetedza maCognos Administrators
Uine zvakawanda zvekuita, nguva inowanzove yakakosha yeCognos Admin. Zvakawanda zve MotioZvimiro zvePI Pro zvakagadzirirwa kuchengetedza nguva yeCognos Admins. Semuyenzaniso:
Misa inogadziridza yakasarudzika chiito cheiyo seti yeCognos Mishumo.
Tsvaga uye Tsiva yekuvandudza kuwanda kweCognos zvemukati (semuenzaniso kugadzirisa mishumo inoenderana nemodeli yakachinja).
Batch yekuvandudza mvumo pazvinhu zveCognos.
Govera sarudzo dzekuendesa dzemapoka eCognos akarongwa.
Govera wega muridzi weCognos zvemukati kune chero mushandisi.
Gadziridza otomatiki tsoka mumanyowani eCognos (akadai se "Chakavanzika & Kwepfuma").
Govera zvakagadziriswa paramende kune akawanda eCognos mushumo maonero.
Zvese zviri pamusoro ingori ratidziro yenzira idzo MotioPI Pro inobatsira kuchengetedza nguva uye kuwedzera kugadzirwa (uye kungoita kuti hupenyu huve nyore) yeCognos Administrators.
Motio PI Pro zvakare inokusevha mari-kunyanya kana zviwanikwa zvekunze zvaizodikanwa kuti uite mabasa izvo zvino anogona kuita otomatiki.
Shanduko Dzakawanda kuCognos Zvemukati / Kugadziriswa
Kuita shanduko kuzvinhu zvako zveBI muhuwandu zvinogona kurwadza, kukanganisa-kukanganisa, uye kupedza nguva. MotioPI Pro inopa nzira dzakasiyana siyana dzekutarisira kuwanda kweCognos - kusanganisira marongero, marongero, mashejuru, mamodheru, uye zvimwe - zvichikupa iwe kudzoka nguva uye rugare rwepfungwa kupokana nekukanganisa kunogona kuitika.
Izvo zvinogona kushandiswa zvakakura, asi heino mimwe mienzaniso:
Shanduko inoshandura zvinyorwa, mifananidzo, marogo, mafonti, kuchengetedzeka kuwana, mashedhi, parameter, uye zvimwe
Wedzera, bvisa kana kugadzirisa parameter yemazana ekuona maonero
Govera paramita kune akawanda eCognos mushumo maonero
Bulk manejimendi yeboka uye nhengo nhengo
Nyorera zvakaenzana misoro kana tsoka kune akawanda aripo mishumo
Gonesa, dzima, kana kudzima mashedhiyo eCognos evashandisi vazhinji
MotioPI FREEware inosanganisira:
ZSimbisa mushumo (s)
ZWongorora mushandisi kuwana uye mvumo
ZYakadzama mashandisirwo ekuchengetedza
ZTora zvakare zvemukati kubva zvakadzimwa mushandisi (s)
ZTsvaga mishumo inosanganiswa nepakeji
ZTora zvakare yakarasika kana yakashata FM modhi
ZTumira kune HTML
Zvese maficha e MotioPI +:
ZTsvaga uye kutsiva mukati meCognos chinhu (s)
ZGadza parameter yemushumo (s)
ZGadza zvivakwa zveCognos chinhu (s)
ZKugadzirisa zvakaputsika zvinongedzo uye kutsamira
ZExport kune Excel